ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူး၌ကျင်လည်၏တစျခုဖွစျသညျ ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ရဖို့အကောင်းဆုံးစနစ်များ။ သငျသညျကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေနေကြသည်ကိုအထူးသဖြင့်လျှင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ဖန်တီးထားပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ။ လမ်းလျှောက်-in ကိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းရှောက်သွားပုံကိုထွက်ရှာတွေ့တွင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအများအပြားကွင်းတစ်ဦးမာနထောင်လွှားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့.
ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးနှင့် ကြောင်းခြင်းဖြင့်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဘယ်လို?။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများစုမှာနင်္လာမှသောကြာစဉ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သောကြာနေ့မှီတိုင်အောင်တနင်္လာနေ့ကနေစကားပြော။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သည်အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့နည်းလမ်းတွေ။ မကြာခဏသတိမမူတစ်ဦးပွိုင့်မယ့်အလုပ်အကိုင်အလာပြီများအတွက်စံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ မလွယ်ကူဘူး။ ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ဈေးကွက်တွင်ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အင်တာဗျူးရှာဖွေတာနဲ့မန်နေဂျာငှားရမ်း.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်ဆဲနိုင် အကောင်းတစ်ဦးငှားရမ်းမန်နေဂျာကိုရှာဖွေ။ အပြုသဘောဘက်တွင်ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပို့ချအလုပ်ရှင်များငှားရမ်း။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူး ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဘို့အကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။ အဖြစ်မကြာမီသင်တို့တွင်အလုပ်လျှောက်ထားအဖြစ် ဒူဘိုင်း။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်အသစ်အလွတ်နဲ့ကြိုဆိုစာတစ်စောင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ယခုတိုင်အောင်အများအပြားအလုပ်ရှာဖွေသူများကုမ္ပဏီသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်အတူပြောနေတာကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူး၌ကျင်လည် - ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Find
foreground ကအဓိကစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လက်လီကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်စုဆောင်း။ သူတို့အခွအေနမြေား, စက်မှုဇုန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ထုတ်လုပ်သူလက်အောက်တွင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူလည်းအမြန်အင်တာဗျူးအဘို့အကွင်းတည်ဆောက်နေ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ဖို့လိုအပ် အလုပ်ရှင်များကိုဆွဲဆောင်နှငျ့သငျ join ဖို့မန်နေဂျာငှားရမ်း။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်တစ်ဦးအလုပ်လွတ်ဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ န်ထမ်းတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားငှားရမ်း။ ထိုသူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးလမ်းကိုသူတို့လုပ်နိုင်သလောက်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်း။ အဆိုပါ၏အချို့ ဤဝန်ဆောင်မှုများတောင်းဆိုငှားရမ်းမန်နေဂျာ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်စုဆောင်းမှုအဖြစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုကူညီပေးပါတယ်။
ကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအသစ်ကအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါအများစုဟာ မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီများ နေ့တိုင်းနီးပါးငှားရမ်း။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျမွငျ့မား rated အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာဖွေနေ start သငျ့သညျ။ ဥပမာ, ဘဏ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ နောက်ကိုလိုက်မယ့်စမတ်စိတ်ကူးတူသောပုံရသည်။ သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းအခြားကုမ္ပဏီများစော်ဘွားအတွက်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အိုင်တီကုမ္ပဏီများကဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အားလုံးငှားရမ်းဖြစ်ကြပြီးသင်အလွယ်တကူသည်ဤအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အင်တာဗျူးများအတွက်အမြန်လမ်းလျှောက်ရှာတှေ့နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ပါကစ္စတန်ကနေလောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျွမ်းကျင်သူများ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ရုံယူအေအီးကူးလာကြ၏။ ထိုအခါသင်သည်ကျိန်းသေပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အစီမံခန့်ခွဲသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဖြစ်နိုင်ခြေပြီးသားရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ CV ကိုရဲ့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများ 8 ရက်သတ္တပတ်မှတက် 12 န်းကျင်ဘို့ငှားရမ်းဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်။ သင်ပင်တစ်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ပြည်ပမှာအလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုမီ။ သငျသညျအတော်လေးရှိသင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်အကြောင်းကိုကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များ။ သငျသညျစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ပါ။ သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ် အလုပ်တစ်ခုရဖို့စျေးကွက်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို။ သငျသညျပိုလတ်ဆတ်လျှင်ထိုမှတပါး, သင်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုစတင်ရန်လက်ပေါ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကို။
အဆိုပါစမတ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်အင်တာဗျူးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် WhatsApp ကိုဒေသခံအုပ်စုများ။ လက်ရှိတွင်ဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသူစုဆောင်းမှုပညာရှင်များအများကြီးရှိပါတယ်။ 80 ကျော်% ဒူဘိုင်းရဲ့ CV ကိုရဲ့ online ပေးပို့ခြင်းအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ဒါကြောင့်အလုပ်ရှင်အချို့သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်စမတ်လမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ပင်ပေါ်မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောသို့မဟုတ် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်သ အနာဂတ်အလုပ်ရှင်ရန်။ ဤနည်းအားဖြင့်, သင်အပြုသဘောရလဒ်ကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Research ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဘို့နောက်ထပ်စမတ်စိတ်ကူး။ အဲဒါက ... ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ဟိုတယ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ updated CV ကိုနှင့်ရိုးရှင်းစွာနေရာလွတ်တစ်ခုကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ်၌ကျင်လည်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကသူတို့အသစ်များကိုန်ထမ်းများ၏လိုအပ်ချက်၌ရှိကြ၏လျှင်။ နီးပါးပွဲချင်းပြီးအင်တာဗျူးဆောင်ရွက်ခြင်း။ တဖန်သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါ လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌သင့်ရဲ့အသက်တာသစ်ကိုစတင်မယ့်အခွင့်အလမ်း။
သင်တို့အဘို့ဖွစျနိုငျပါတယျဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူး၌ကျင်လည် !. အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျကိုကူညီနိုငျ ယူအေအီးမှာပိုထွက်ရှာတွေ့မှအခြားသူတွေ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်အလုပ်ရှင်များနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ။ HR ကုမ္ပဏီများမှ အဓိကအားလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးပို့ချ။ ငှားရမ်းထားခံရဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေပမာဏကြီးမားနံပါတ်များ၌ရှိကြ၏။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်အတူတူပင်နေ့၌လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်။ အမြောက်အများ်ထမ်းခေါ်ယူမှုမန်နေဂျာထံမှအလုပ်တစ်ခုရယူခြင်းယူအေအီးအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးစိစစ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေစုဆောင်းမိုဘိုင်းအပေါ်စုဆောင်းနေကြသည် နေရာလွတ်များစွာသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အိပ်မက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများ အဘယ်သူသည်စော်ဘွားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီနေကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ထဲကမဟုတ်အသီးအသီးအလုပ်အကိုင်အွန်လိုင်းရှာဖွေတာသို့မဟုတ် CVS နှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေသည်။ အများစု၏အများစုမှာရုံဒေသခံအလုပ်တွင်ကျယ်စွာအပေါ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအပ်လုတ်။ ပြီးတော့ မှော်ဖြစ်ပျက်ကိုစောင့်ဆိုင်း.
HR မန်နေဂျာများအနေဖြင့်နေရာလွတ်ရှင်းလင်းရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ အင်တာဗျူးသူတို့သစ်ကိုဝန်ထမ်းမှကမ်းလှမ်းနေကြသည်နီးပါးတိုင်းလွတ်အတွက်ထိုနေ့ရက်တွင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစာတစ်စောင်ပေးအပ်ထားတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အဆိုပါကုမ္ပဏီများဆိုလိုသည်မှာအလုပ်ရှင်များနှင့်စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကြိုးရှိစီမံခန့်ခွဲ။ သို့ အဆိုပါစုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ် သင်တဦးတည်းသောနေ့၌အလုပ်ရရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသူတို့က, ထိုနေ့ရက်တွင်အလုပ်အတည်ပြုချက်ကိုရယူအဖြစ်လျှောက်ထားများအတွက်။
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အဘူဒါဘီအတွက်အများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူသည် စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းပွဲချင်းပြီးနီးပါးငှားရမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျမွငျ့မားနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် Google ကတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင် သို့မဟုတ်အချို့ cryptocurrency သစ်ကိုစတင်ပါ။ သူတို့ဟာအတွက်ငှားရမ်းကြသည် 2020 အထိဒူဘိုင်းကုန်စည်ပြပွဲထွက်အပြေးသောအခါ.
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်တကွ, စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ် ဧရာစကေးအဘို့ပြု နှင့်အမြောက်အများငှားရမ်း။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကလေးစစ်သားတကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကုမ္ပဏီမျှော်လင့်သည်ထက်လျော့နည်းသည်။ ထိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျော်, အနိမ့်စုဆောင်းမှုကုန်ကျစရိတ်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများမှ၌ရှိကြ၏ အလုပ်နေရာလွတ်အဘို့ကြော်ငြာ။ ဒီကိစ္စမှာ, ဒူဘိုင်းတွင်အများအပြားနေရာများသို့လာပြီ ကုမ္ပဏီတချို့ကုန်ကျစရိတ်ကယ်တင်လိမ့်မည်။ ကောင်းသောအလုပ်တွင်ကျယ်စွာအပေါ်တဦးတည်းတစ်ခုတည်းကြော်ငြာလည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချအတွက်အထောက်အကူပြုကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ရဖို့။ ရှာဖွေစုဆောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲဒေသခံတစ်ဦးကစျေးကွက်ကနေ updates များကိုရရှိရန်သေချာအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရှိသည်။
တနင်္ဂနွေပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်ကောက်ယူဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူး၌ကျင်လည်။ သောကြောင့်အများကြီး၏ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူကိုယ်စားလှယ်လောင်း တနင်္လာနေ့ကနေသောကြာနေ့ရန်။ နိုင်ငံစုံအရည်အသွေးအရငျးအမွစျအဘို့အရေးကြီးလှသည်။ ကုမ္ပဏီများကအင်တာဗျူးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် 2019 ။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများစုမှာတနင်္ဂနွေတခုတခုအပေါ်မှာချွတ်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ပါရမီ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ဟုအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ သငျသညျသောကြာနေ့မှရက်ပေါ်တွင်အင်တာဗျူးကတနင်္လာနေ့ fo သွားကြဖို့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေလျှင်။ ဒါပေါ့ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလုပ်ကတိကဝတ်များ။ ဒူဘိုင်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်လမ်းလျှောက်, သင်တနင်္ဂနွေရက်တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတက်ရောက်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အသစ်သောအိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်ကုန်စည်ပြပွဲသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများစုဟာပြီးသားစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာမှ CV ကိုပေးပို့ခြင်း။ သငျသညျပြီးသားပြုနေကြသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကာလ၌သင်သည်ဒူဘိုင်းလာရောက်လည်ပတ်ပါလိမ့်မည်လို့ပဲ။ သင်ယူအေအီးရောက်ရှိမည်အခြိနျမှာကြိုတင်ဘွတ်ကင်အင်တာဗျူးသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေါ့, သငျသညျကျွမ်းကျင်သူများဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်ပေါ်ကြောင်းပြုနိုင်သည် အလုပ်အကိုင်အအုပ်စုများ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအချို့မှာအသစ်ကရှာဖွေစုဆောင်းရှာဖွေတာအဘို့ထိုသူတို့အသုံးဝင်သောတွေ့ပြီ။ သူတို့ပြည်ပမှာအခြေစိုက်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင် ဒူဘိုင်းသွားရောက်လည်ပတ်ရန်မျှော်လင့်.
အဆိုပါငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အမြဲဒူဘိုင်းအတွက်စနစ်တကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာဗျူးအတွက်လမ်းလျှောက်ကြိုတင်ထုတ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ တိုင်း သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာအချိန်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ကုမ္ပဏီများကအမြဲပထမဦးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ shortlisting ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအပေါ်အခြားတစ်ဖက်တွင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပညာရေးနှင့်အရည်အချင်းများ၏အခြေခံရလဒ်ကို။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, စာဖြင့်ရေးသားစမ်းသပ်ပေးဖြစ်ရပ်အများစု၌တည်ရှိ၏။ တိုင်းစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်အလွန်အသေးစိတ်နှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းစဉ်ကို run ။ အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်း နှင့်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများကိုအတွက်အင်တာဗျူး၏ပြေးအရေးကြီးပါသည်။ ်ထမ်းရှာဖွေသူနှင့်မန်နေဂျာများနှင့်အတူထိုနညျးတူခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံး HR ညှိနှိုင်းမှု။ ဤလုပ်ငန်းစဉ် Making ယူအေအီးနေထိုင်ဘို့အတော်လေးစိတ်ဝင်စား။ စနစ်တကျလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကုမ္ပဏီများမှယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်မလိုချင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ filter ကူညီပေးနေ။ အသင့်တော်ဆုံးရရှိရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ filtering န်ထမ်းခေါ်ယူမှု MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ။
ဒါ့အပြင်ယူအေအီးအစိုးရအမျိုးသမီးတွေအလုပ်သမားများအတွက်အသိအမြင်မြှင်။ ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှအမြိုးသမီးမြားကိုအမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးလာလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးအဘို့ကိုသိသည်။ ဒါကြောင့် သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေနေကြသည်နှငျ့သငျဒူဘိုင်းအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင်။ သင့်အနေဖြင့်စနစ်တကျလုပ်ငန်းစဉ်အားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ နှင့်ကျိန်းသေပြုလုပ်၏အားသာချက်ယူပါ။
GCC နိုင်ငံများရှိအလုပ်ရှင်များစွာသည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည် နေရာလွတ်အသစ်များအတွက်စုဆောင်းခြင်း. ပြည်ပရှိကြုံတွေ့ခဲ့ကြ ကနေအလွန်ကောင်းသောလုပ်ခ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ။ နေ့တိုင်းကုမ္ပဏီသစ်သို့ပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမြောက်အများဝင်ရောက်လာသည် တောင်အာဖရိကကနေဒူဘိုင်းမှ။ ဒီတော့ယူအေအီးအတွက်နေရာလွတ်အမြဲတမ်းလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးစဉ်ကာလအတွင်းဖြစ်စဉ်ကိုလွန်သောသူတို့အားဖန်ဆင်းနေကြသည်။ သငျသညျ join သောအခါအညီအမျှအရေးကြီးပါတယ် တစ်ဦးဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များအတွက်.
ရိုးရိုးသားသားဖြစ်သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. အကြီးခံစားရသင့်တယ်။ အမြဲတမ်းအဆင်ပြေခံစားရသင့်တယ် Afiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဥပမာဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလာရောက်ပူးပေါင်း။ အဆိုပါအများစုဟာ ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ကောင်းစွာ-paid ကုမ္ပဏီများမှပူးပေါင်း။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, တူညီတဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့ဆန္ဒရှိနေသောများစွာသောအခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများရှိပါတယ် အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်အဘို့နေ့ရက်ကို။ အလားတူစီမံကိန်းကိုနှင့်ထိုမှတပါးအလားတူတာဝန်ယူနှင့်အတူတူပင်အဆင့်မှာနိုင်။
ဒူဘိုင်းရဲ့အဖြစ် အကြီးဆုံးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယူအေအီးဈေးကွက်အတွက် tools တွေကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများနှင့်နိုင်ငံတကာပြည်တော်ပြန်ဆွဲဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ကြောင်းစွမ်းရည်စုဆောင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုအဖွဲ့ကဖြစ်စဉ်ကိုအိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းမှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသိသာအရေအတွက်ကို။ HR ကုမ္ပဏီများမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစုဆောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေးဒေတာဘေ့စမှသူတို့ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
သငျသညျဒူဘိုင်းအများအပြားအလုပ်အေဂျင်စီများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာမြို့ကိုသွားနှင့်သင်၏ CV နှင့်အတူ၌ကျင်လည်နိုင်ပါတယ်။ ရှိပါတယ် သင်ခင်နောက်ကိုလိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ကောင်းသော-bits။ ကျွန်တော်အစာရှောင်ခြင်း, အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားမရဖြစ်ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ဒူဘိုင်းတွင်ဆရာမရာထူး။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးဖမ်းပြီးသငျ့သညျ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ prequalified အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့အားမရနေကြတယ် အလွန်ဂရုတစိုက်တုံ့ပြန်မှု ယူအေအီးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်။ ကျနော်တို့ LinkedIn နှင့် Facebook ပေါ်မှာအလွန်တက်ကြွဖြစ်ကြသည်။ ထိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာ အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြော်ငြာများအားမရ စာနယ်ဇင်းနှင့်ဝဘ်အစားဒူဘိုင်းတစ်ဦးစံလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးအပေါ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူး၌ကျင်လည် - သင့်ရဲ့ Self-ကိုပြင်ဆင် Get.
ကျွမ်းကျင်သူများမိမိတို့၏ CV ကိုအတူလမ်းလျှောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း။ အဲဒါကိုအတွက် pop ့အကူအညီတောငျးဖို့တန်ဖိုးရှိကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမျိုး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအတွက်ပိုကောင်းဖျော်ဖြေအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများမျိုးကိုမြင်လျှင်အလွန်ကောင်းစွာလှုံ့ဆော်ကြသည်။ သူတို့ဒူဘိုင်းအချို့အရည်အသွေးကိုအင်တာဗျူးရတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့် headhunters ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဆန်းစစ်။ တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူတစ်ဦးအတွေ့အကြုံကောင်းရှိပါတယ်လျှင်သင်တန်း၏, သူတို့ကသူ့ကိုအလုပ်တစ်ခုကိုငါပေးမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးဖမ်းပြီး။ ဒီနေရာ သင်နှင့်သင့် familly အဘို့ဖန်ဆင်းထားသည်.
ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းဒေသခံအမှုဆောင်အရာရှိ၏အချို့။ ရှိ ပြီးသားထူထောင်ကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်း။ ဒါကြောင့်သင်ကဖြစ်စေလမ်းအတွက်၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရသွားကြသည်ကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်ယခင်ကစော်ဘွားအတွက်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ကြပါလျှင်၎င်းသည်ကြီးမားသောပေါင်းအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သစ်တစ်ခုအားကြီးသောနာမကိုအမှီထူထောင်ရန်နှင့် စော်ဘွားအတွက်အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလာပြီ ခဲယဉ်းသည်။ ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြာပါသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီအတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကြုံတွေ့နှင့်အင်တာဗျူးအရလုံလောက်သောအရည်အချင်းများနေတယ်ဆိုရင်။ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အစီရင်ခံစာတည်ထောင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည် သင်သည်သင်၏အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအများကြီးကူညီပေးသည်?။ တချို့ကစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများသည်များမှာ ဖိလစ်ပိုင်စျေးကွက်ကနေအတော်လေးကြီးကြီးမားမားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသုတေသနပြု။ ထိုသူတို့ကအတွေ့အကြုံပေါ်တွင်သင်၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်ယုံကြည်မှုအခြေစိုက်စခန်းတည်ထောင်။ သူတို့မျက်စိ၌ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သငျသညျသစ်ကိုအလုပ်အကိုင်အများအတွက်စိန်ခေါ်မှုဂိမ်းကိုသိသူတစ်ဦးကောင်လေးတူရမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားတဲ့အခါ။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အကောင်းတစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီး။ ထိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကောင်းဆုံးရှာဖွေနေစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတခုရဖို့ကြိုးစားပါ။ ထိုအဖြစ်နိုင်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အရေးအသားအကြောင်းကိုသိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရရှိရန်ကြိုးစားပါ။ သင်တို့သည်လည်းနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုကနေကိုယ်ရေးရာဇဝင်စာရေးဆရာငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျလုပျနိုငျအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဒူဘိုင်းအတွက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီအတွက်ညာဘက်မန်နေဂျာ၏ CV ကို drop နိုင်သူအချို့ကလူရ။ ဒူဘိုင်းမှာတော့ဥပမာ, သငျသညျ Mercedes-Benz အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှာတော့မည်သူမဆိုများအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
တကသင့်သောကာလထိုက်သည် ခွဲခြားဒူဘိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များ။ အလုပ်အကိုင်အအားမရဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်ဒေသခံအလုပ်ရှင်များထည့်ပါ။ သူတို့ကအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များမှာနှင့်သင်လျင်မြန်စွာအလုပ်ရှင်များနှင့်အင်တာဗျူးတွင်ရနိုင်သည်။ Dubizzle ဒူဘိုင်းကျွောငွာ, Khaleej Times သတင်းစာအခမဲ့: ကိုယျတျောကိုသငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောအလုပ် site ကိုဖြစ်ကြသည် ဒူဘိုင်း Classifieds.com, ခွဲခြား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအစမှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဥပမာအခြားကုမ္ပဏီများ။ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းနေသောထိုသူအချို့တို့သည်လည်းရှိပါသည်။ ထိုသူတို့ကအင်တာဗျူးဘို့သင့်ကိုတက်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
CV ကိုအတွက်မကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်း - က fix ဖို့ဘယ်လို?
ဒါဟာသင် OK ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြားအရာဖြစ်၏။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအချို့မှာအတွေ့အကြုံမရှိခြင်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒူဘိုင်းမြို့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပိုပညာပေး နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုသင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာထွက်ရှာပါ။ ထိုသူတို့ကပဲမဆိုအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖမ်းဆုပ်နေကြသည်ဆိုအလုပ်ရရန်။ ဒီတော့ CV ကိုအတွက်ပေါ်အခြေစိုက်စခန်းဖွင့်လအနည်းငယ်အဘို့အနည်းအလုပ်အကိုင်များရှိရလိမ့်မည်။ အခါအလုပ်ရှင်, ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, HR မန်နေဂျာများ CV ကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သူတို့၏ဤပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်မတရားဆုံးဖြတ် အမြန်အလုပ် changer။ ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်လမ်းအတွက်သေချာစောင့်ရှောက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပါစေ။ ဒါကမနက်ဖြန်အနေအထားကိုပြောင်းလဲပစ်မည်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့တူမကြည့်ပါဘူး။
ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးဘို့သင်ကိုယ်တိုင်အဆင်သင့်ရယူပါ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ CV ကို upload လုပ်လိုလျှင်သင်ရလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးတည်နေရာပေါ်.
သင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းယောဘ? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအထိုအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန် ယူအေအီး နှင့်ကုမ္ပဏီများငှားရမ်းကြည့်ပါ။ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းကုမ္ပဏီ နှင့် ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိဒေသခံအလုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ ဒေသ။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီ။ ယခုရဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူး၌ကျင်လည် !.